I-Nobivac Feline 1-HCPCh + FeLV
Eli phepha linolwazi ngeNobivac Feline 1-HCPCh + FeLV ye ukusetyenziswa kwezilwanyana .
Iimpawu zeNobivac Feline 1-HCPCh + FeLV
Izilumkiso kunye nezilumkiso zeNobivac Feline 1-HCPCh + FeLV
Ulwalathiso kunye nolwazi lwedosi yeNobivac Feline 1-HCPCh + FeLV
Inkampani: I-Intervet / Merck Health Animal
FELINE LEUKEMIA-RHINOTRACHEITIS-CALICI-PANLEUKOPENIA- CHLAMYDIA PSITTACI IVANGCI Ukulungiswa kwentsholongwane ebukhoma kunye I-Chlamydia kunye neNtsholongwane ebuleweyo
UKUSETYENZISWA KWEZILWANYANA KUPHELA
NGOKUNGABIKHO KOBUDLELWANE BABASETYHINI-ABAXHASI-BALAWULI, IMIMISELO YOKUSETYENZISWA KWEZIBONELELO ZIYAKUTHILELA UKUTHENGISWA KWEBHAYIBHILE, UKUHLAWULWA, UKUHLAWULWA, UKUHLAWULWA KWEENKCUKACHA OKANYE NOKUNQUNYANYISWA KWALO MTHETHO WOMNTU NGAMNYE WELI PAKILE.
uyithatha njani i-belviq
INGCACISO YEMVELISO: I-Nobivac®Isitofu sokugonya se-Feline 1-HCPCh + FeLV sisidibanisi sokudibanisa esidibanisa izibonelelo zeNobivac®I-Feline 1-HCPCh kunye neNobivac®I-Feline 2-FeLV kugonyo olunye.
Le mveliso ibonakalise ukuba iyasebenza ekugonyeni iikati ezisempilweni iiveki ezili-9 ubudala okanye ngaphezulu ngokuchasene ne-feline rhinotracheitis, calici, panleukopenia, feline leukemia virus kunye I-Chlamydia psittaci . Ixesha lokuzikhusela ngokuchasene ne-feline leukemia virus ubuncinci iminyaka emi-2. Ixesha lokungakhuseleki kwi-feline rhinotracheitis, calici, panleukopenia virus kunye I-Chlamydia psittaci ayisekwanga. Ukuphonononga ukusebenza kwedatha kunye nokhuseleko, yiya ku-produidata.aphis.usda.gov.
Le mveliso ibonakalise ukuba iyasebenza ngokuchasene ne-viremia engapheliyo kwiikati ezivezwe yintsholongwane ye-leukemia yentsholongwane.
Isisombululo kunye noLawulo
Ngaphambi kokuyisebenzisa, shushu iNobivac®I-Feline 2-FeLV kwiqondo lobushushu begumbi kwaye ushukume kakuhle. Dlulisa imixholo yeNobivac®I-Feline 2-FeLV igutyana kwiNobivac®I-Feline 1-HCPCh igutyana nge-aseptically. Hlanganisa ngobumnene de uchithe.
Amayeza amabini afunekayo kugonyo oluphambili.
Ukugonywa okokuqala: Tofa idosi e-1 (1 mL) ngokungxama okanye nge-intramuscularly kwiiveki ezili-9 ubudala okanye ngaphezulu.
Ugonyo lwesibini: Tofa idosi e-1 (1 ml) ngendlela engaphantsi okanye ye-intramuscularly iiveki ezi-3 ukuya kwezi-4 emva kogonyo lokuqala.
Ubukho beentsholongwane zoomama buyaziwa ukuba buphazamisa ukukhula kwamathumbu omzimba kwiikati kunye nokongezwa okunyanzelekileyo kuya kufuneka kuninzi lwezilwanyana ezisencinci. Ngokwembali, ukuvuselelwa kwakhona konyaka kuye kwacetyiswa ngale mveliso. Imfuno yesi sikhulisi ayikagqitywa. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde usebenze, ngokubanzi okanye ebusweni bomzimba womama, qhagamshelana nodokotela wezilwanyana okanye umenzi.
● Gcina kwi-2 ° - 8 ° C (35 ° -46 ° F).
● Musa ukubanda.
● Sebenzisa iinaliti kunye neesirinji ezintsha ezingenazo iikhemikhali.
2172 ipilisi emhlophe embhoxo
● Musa ukudibanisa nezinye iimveliso, ngaphandle kokuba kuchaziwe kwileyibhile.
● Yenza imixholo engasetyenziswanga ngaphambi kokuba ilahlwe.
● Kwimeko yokuvezwa kwabantu, qhagamshelana nogqirha.
● Iqulethe i-gentamicin kunye ne-amphotericin B njengezinto ezisigcinayo.
● Ezinye iingxelo zibonisa ukuba kwiikati, ukulawulwa kwezinto ezithile zezilwanyana kunokubangela ukuba kwenziwe i-fibrosarcomas yenaliti.
● Musa ukuzitofa iikati ezimithiyo.
● Ukusetyenziswa kwemveliso yebhayoloji kunokuvelisa i-anaphylaxis kunye / okanye olunye uhlaselo lwe-immune-Mediated hypersensitivity reaction. Unyango: I-Epinephrine, i-corticosteroids, kunye ne-antihistamines zonke zinokuboniswa kuxhomekeke kubume kunye nobukhali bempendulo.
● Kubalulekile ukuqonda ukuba iimeko ezithile kunye neziganeko zinokubangela ezinye iikati zingakwazi ukukhula okanye ukugcina impendulo eyaneleyo yamajoni omzimba emva kogonyo lwe-FeLV. Phambi kokuba sesichengeni, okanye sisifo sesi sifo, ziimeko apho ugonyo lungenakuguqula ikhosi yesi sifo. Ke ngoko, kuvavanyo lokuchonga zonke iikati ze-FeLV antigen ngaphambi kogonyo kuyacetyiswa. Kwakhona, ukugonywa ngale mveliso akuyi kubonelela ngokhuseleko ukoyisa intsholongwane ye-feline immunodeficiency virus (FIV), enye i-retrovirus ye-feline. Kubalulekile ukucebisa umnini wekati kwezi meko ngaphambi kogonyo.
ukuchama kabuhlungu emva kokususwa kwe-catheter
I-Intervet Inc. d / b / iMpilo yeZilwanyana eziMnandi
I-VLN 165A / PCN 1559.2B
1 800 224-5318 (eUSA)
1 866 683-7838 (eCanada)
amayeza okuphelisa ukopha
2 IGIRALDA FARMS, MADISON, NJ, 07940
Inkonzo eyenzelwe: Ngama-800-521-5767
Idesika yoMyalelo: 800-648-2118
Inkonzo yobuGcisa (isiHlalani seZilwanyana): 800-224-5318
Inkonzo yobuGcisa (Imfuyo): 800-211-3573
Indawo yeWebhusayithi: www.merck-animal-health-usa.com
Kwenziwe zonke iinzame zokuqinisekisa ukuchaneka kolwazi lweNobivac Feline 1-HCPCh + FeLV epapashwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yase-US okanye into yokufaka iphakheji.
ukucima njani i-mac
ngaphezulu kwekhawuntari yeepilisi zokuchama ngaphambi kwexesha
yintoni umbukeli ion
ukutya kwe-bland ye-diverticulitis
amox tr-k clv isebenzisa